Zvidzidzo zveChirungu »Saiti yekudzidza yeGerman ine zvidzidzo zveGerman
German Education Center	 Mbudzi 6, 2021 0
Mhoro, muchidzidzo chino tichaona zvirevo zvechiRungu uye zvirevo zvechirungu. Tichapa ruzivo pamusoro pezvipikisi zvinonyanya kushandiswa muChirungu uye muenzaniso mitsara pamusoro pezvipikisi, uye tichapawo chinyorwa chemuenzaniso pamusoro pezvipikisi muChirungu. Pamusoro peizvi, kugadzika muzvirevo zveChirungu…
Mhoroi, muchidzidzo chino tine nhengo dzemhuri dzeChirungu, mhuri yedu, kusuma mhuri yedu, mhuri yedu yechirungu nehama,…
German Education Center	 Aug 27, 2021 2
Mhoro shamwari, muchidzidzo chino tichaona mitsara yekuzvisuma muChirungu, tichizvisuma neChirungu…
Muchidzidzo chino, tichaona Chirungu days subject narration. Mumusoro wenyaya yedu yakanzi Mazuva eChirungu neTurkey yavo, kuchave zvakare nekuitwa maekisesaizi nezvemazuva eChirungu uye mitsara yekuenzanisira nezvemazuva eChirungu. Tichabatanidzawo zviperengo uye mataurirwo emazuva eChirungu. Mazuva eChirungu…
Mhoroi, muchidzidzo chino tichaona mitsara yekukwazisa yeChirungu uye mitsara yekuonekana yechirungu. ChiRungu…
Muchidzidzo cheChirungu chino, tichaona nhamba muChirungu. Kutanga nhamba dzeChirungu dzinosvika gumi, saka...
Muchidzidzo chino chinonzi alphabet yechiRungu nemavara echiRungu, tichadzidza mabhii echiRungu, mabhii ari muarufabheti yechiRungu, kuverenga nekunyorwa kwemavara echiRungu. Muchirungu yedu yehurukuro yearufabheti kosi, isu tichabatanidzawo muenzaniso mitsara nezvemavara echiRungu. ChiRungu…
Panguva ino, muchidzidzo chedu chemuchero wechiRungu, mazita emuchero wechiRungu, zviperengo zvemichero muChirungu uye…
German Education Center	 12 Sea, 2021 0
Muchirungu ichi chine zvisazitasingwi zvechirungu kosi, zvisazitasingwi zvechirungu, zvinoti Chirungu chine zvirevo…
Isu tinofunga kuti vhidhiyo yezvidzidzo zveGerman nehurukuro dzeChirungu inzvimbo huru kune avo vanoziva Chirungu uye vanoda kudzidza chiGerman. Isu tinogovera vhidhiyo yechidzidzo chechinomwe yepasirese Dzidza chiGerman nhevedzano nepfungwa yekuti kune shamwari dzinogona kubatsirwa nazvo. Vamwe vevatinodzidza navo vanotaura chiGerman…
Zvidzidzo zveGerman nehurukuro dzeChirungu. (Vhidhiyo chidzidzo) Vhidhiyo yechidzidzo chechitatu yepasi rose ine mukurumbira Dzidza chiGerman ...
Zvidzidzo zveGerman nehurukuro dzeChirungu. Zvidzidzo zveGerman zvine vhidhiyo yehurukuro yeChirungu, semaonero edu, ese ari echiRungu…